Ninkii geystay weerarkii Australia oo maxkamad lasoo taagay | Saxil News Network
Ninkii geystay weerarkii Australia oo maxkamad lasoo taagay
December 23, 2017 - Written by editor
Image captionHalka uu weerarka ka dhacay
Nin lagu eedeeyay inuu baabuur jiirsiiyay dad marayay hareeraha waddo ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa lagu soo oogay 18 dacwadood oo isku day dil ah.
Ninkan oo la sheegay in qaab qaxooti ahaan ah uu ku soo galay dalkaasi ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka Afghanistan. Nuur ayaa ka soo muuqday maxkamadda maalintii sabtida, waxaana wali gacanta ku haya laamaha ammaanka ee Australia.
Booliska waxaa ay shegeen inay rumeesanyihiin in weerarkani uusan wax xiriir ah la laheyn fal argagixiso, waxayna intaa ku dareen in ninkani uu qabo xanuun dhanka dhimirka.
Laba iyo toban kamid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka ayaa wali lagu daaweynayaa cisbitaalada magaalada Melbourne. Saddex kamid ah dadkaasi ayaa la sheegay in xaaladoodu ay aad u liidato, halka sagaal kamid ah na ay ahayeen ajaanib ku sugnaa dalka Australia, kuwaa oo ka soo kala jeeda dalalka Koonfurta Kuuriya, Ireland, Venezuela, Shiinaha, Hindiya iyo Talyaaniga.
Warbaahinta ABC ee dalkaasi ayaa ku soo warrantay in Mr Nuur uu u muuqday qof qiireysan intii uu ku sugnaa maxkamadda. Nuur waxaa uu eegey hoos kadib markii uu arkay hooyadii oo ilmeeneysa. Booliska dalka Australia ayaana la geliyay feejignaan dheeraad ah.
Maxkamadda ayaa sheegtay in baaritaan dhanka caafimaadka maskaxda lagu sameeyo ninkan, waxaana lagu wadaa in markale la horkeeno maxkamadda